ကုလားတွေ မီးရှိ့ခံ ရ ပြီ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Copy/Paste » ကုလားတွေ မီးရှိ့ခံ ရ ပြီ	22
ကုလားတွေ မီးရှိ့ခံ ရ ပြီ
Posted by ရန်ကုန်သား on Jun 15, 2012 in Copy/Paste | 22 comments
ယနေ့ နေ့လည် ၁ နာရီခန့်က အားအားယားယား လူငယ် တစ်သိုက် ရှမ်း၉မီးရိုက်ကြရာ အနည်းငယ် မူးနေသူ လူငယ်တစ်ဦးမှာ ၁ကိုပွတ်လျှင်ကုလားတက်ခြင်း ၊ ၈(သို့)၉ကိုပွတ် ပြီး ကုလားမျှော်လျှင် ၂၊၃ တို့သာလာပြီး ကုလားပျောက်နေခြင်း၊ ၁၀နှင့်ဆွဲလျှင်ကုလားတက်ခြင်း၊ အပွင့်တူလျှင် ဒိုင်က ကုလားဖြင့် ပါဝါသာပြီး အစားခံရခြင်း တို့ ကြိမ်ဖန် များစွာဖြစ် ပြီး သကာလတွင် ဒေါသများပွင့်အံပြီး ဖဲထုပ်ထဲမှ ကုလားများအား သီးသန့် ရွေးပြီးမီးရှိ့ လိုက်ပါကြောင်း…
ဖဲထုပ် အသစ်နှင့် ဆက် play ကြရာ ထို သူငယ် bank ပေါက်သွားပါသည်။
aero star has written4post in this blog.
View all posts by ရန်ကုန်သား →	Blog
water-melon says: ဘာလဲဟ
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: စကား…
ကားပြီး ပေါက်ကရတွေ..ပြန့် ကုန်ရင် ကောင်းဘူးနော်..အူးလေး.
ညလေး says: အာာာာ….ဘာများလဲလို.အပြေးအလွားဝင်ဖတ်လိုက်၇တာမောလို…..
အူးလေး says: ကျနော့်ကိုခေါ်သလားဗျ
ဟီး မီးရှို့တယ် ကြားလို့ ဘာဂျီးမှန်းမသိ ။
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: ဗုဒ္ဓေါ..
အူးလေးဆိုဘဲ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 66
Myo Min Oo says: ဒီလိုမျိုးတော့မလုပ်သင့်ပါဘူး၊
ဒါဘဲ ဒါဘဲ။ ဒီကစတာဘဲ
ရန်ကုန်သား says: ပျော်စေချင် လို့ နောက်တာပါဗျ…
စိတ်ဆိုး ကြပါ နဲ့ ဗျာ…
ရုတ်ရုတ် ရုတ်ရုတ်တွေ က ပြီး သွား ပါပြီ…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1733
Shwe Tike Soe says: တော်တော် အနောက်… သန်တဲ့ ရန်ကုန်သား……….. ဟွန်. မုန်းထာအေ…….. :P
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8216
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အခုချိန်မှာ ဒီလိုရက်မှာ ဒီလိုဟာသမျိုးက မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 49
မဟာ ထမိန်ကြီးဝါဒ says: အေး..လဲသေလိုက်ပေါ့ကွာ အဲလောက်ထိ ကုလားဘက်က နာနေရင်လည်းးး
shwe kyi says: လူဆိုးကြီးပဲ။
ဖဲကို ဗေဒင်ပဲမေးတတ်တယ်။ ဗေဒင်အပျော်မေးကြတာပေါ့
အဲဒီအခါလည်းကုလားက မလိုဘူးရယ် မီးရှို့လိုက်တော့မယ်။
ဇောက် ထိုး says: အလွန်နောက်တဲ့ ဦးနောက်..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2613
padonmar says: ကိုပေါက်ပြောသလိုပါဘဲ။
ကုလားမဟုတ်တဲ့ ကျမတောင် လန့်ပြီး အရင်ဆုံးဖွင့်ဖတ်ရပါတယ်။
ဒီလိုအချိန်က အရမ်း sensitive ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာရာဇ၀င်မှာ စကောလေထဲလွင့်တာ ငါ့စကောငါ့စကောလို့ လိုက်ဖမ်းရာကနေ ငစကောတပ်ကြီးဝင်လာပြီဆိုပြီး တိုင်းပြည်ပျက်ဖူးပါတယ်။
မဟုတ်မမှန် ၊အကျိုးမရှိ၊သူတပါးလည်း မနာကြားလိုတဲ့ စကားမျိုးပါ။
နောင်ဒါမျိုး post မတင်စေချင်ပါ။
သားဦး၊မြေးဦး says: ခေါင်းစဉ်လေးပြောင်းပြီး ဘင့်ခ်ပေါက်သွားခြင်းပေါ့။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 303
memeseku says: ဝေး …………………….. ရီရတယ်ဝေးးး……
ဟာသလားဟင်… ?????????????? :o :o
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1020
intro says: အော်… ဒါမျိုးကတော့ မနောက်သင့်ပါဘူး။ ဒီနေ့မနက်ကတောင် ကြားမိသေးတယ်။ ကုလားတစ်ယောက် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲမှာ ၀င်ပြီး ရိုက်နေတယ်တဲ့…။ ဟုတ်လား ဘာလား မေးကြည့်တော့မှ (နံပြား ရိုက်တာပါတဲ့၊ နောက်တာပါ တဲ့) ကောင်းရော။
cum min says: ဟုတ်တယ်….ညကလဲကုလားနှစ်ကောင်အရိုက်ခံရလို…တဲ…သူကလဲအတော်ဆိုတဲဗျ…. အခန်ထဲထီလာတာ….. စိတ်တိုတိုနဲပိတ်ရိုက်လိုက်တယ်….အဲပွဲ1000ရှုံးတယ်…
cum min says: အော်ကျန်ကဲလို.. 10ပြန်လာယူတာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 287
ဝေးလွင့်တိမ် says: ရန်ကုန်သားရေ ခု လိုအခြေအနေမျိုးမှာ အဲလိုနောက်တာမျိုးတော့လုပ်ဖို့မကောင်းဘူးဗျို့ ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 215
မိုး မင်းသား says: ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ..ဟယ်..။ငါ့မှာ တော့ တကယ်ထင်လို့ ။
etone says: အဲ့ဒါတွေအလုပ်မဟုတ်တာ … သြော် …. လူတွေ လူတွေ အာသိပ်ချောင်တဲ့ ကိစ္စက လွန်လွန်းတယ်… ။
ဒီလိုအချိန်မှာနောက်သင့်သလား ၊ ပြောင်သင့်သလား စဉ်းစားဥာဏ်နဲသွားပုံပဲ …. ။
ဒီလိုနောက်ပြောင်လိုက်လို့ရော ဘာအကျိုးများ ခံစားရမယ်ထင်သလဲနော် …. ။
တစ်ခါတစ်လေနောက်ပြောင်တယ်ဆိုတာ …. စိတ်အပမ်းဖြေစရာ ၊ စိတ်ဖြေလျော့စရာဖြစ်ပေမယ့် …. အခုဟာက နောက်ပြောင်တယ်ဆိုတာထက် …စာဖတ်သူကို စော်ကားတယ် သက်သက် အရူးလုပ်တယ်လို့ပဲ မြင်မိတယ် …. ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 361
မမ အညာသူ says: ကိုကိုရန်ကုန်သား၇ယ်………မမညာကတော့ဘာလဲလို့ဖတ်လိုက်ရတာ
Comments By Postသို့ ချစ်သောဖေဖေ - Kaung Kin Pyar - ခရီးသည်ကြီးနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၄) - သူကလေး - GaviaGirlကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - သူကလေး - ခင် ခကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - ခင် ခ - kyeemiteငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - သူကလေး - အလင်း ဆက်ဟေမာနေဝင်း ထောင်မှလွတ်နှင့် အခြားNews - Kaung Kin Pyar - TNAဆက်သွယ်မှု ဧရိယာပြင်ပမှာ - kyeemite - သော်ဇင် (လွိုင်ကော်)ပိတောက်ပန်းတွေကြူကြူဝေတို့အညာမြေပန်းတွေ - ခင် ခ - TNAဦးဖိုးလူနှင့် ပထမဆုံးများ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - kyeemite - chitလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့ - မွေ့ကေသာ - TNAသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - ခင် ခ - အလင်း ဆက်စက္ကန့်သုံးရာ ဘာဝနာ - ဆူး - ဦးကြောင်ကြီးအတ္တဆန် - kyeemite - ခရီးသည်ကြီးအဟံ ပထမံ - TNA - ဆူးကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - TNA - ဦးကြောင်ကြီးPassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - kyeemite - အောင်ကြူးမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - ဦးကြောင်ကြီး - Miss Crystalline``တစ်ခါက အင်းယားရယ်´´ - ဦးကြောင်ကြီး - TheWinner GetprizeCongress - Ei Kyipyar - မဟာရာဇာ အံစာတုံးလူပါး ပုလင်းထိ - ဆူး - ဆူးနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - Ei Kyipyar - amatminကံဇာတ်ဆရာ စီမံလေသမျှ - ဆူး - ဆူးအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - kyeemite - ဦးကြောင်ကြီးယုံလား? - ဦးကြောင်ကြီး - ဦးဦးပါလေရာအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - kyeemite - padonmarEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities